देशभर बाढी र पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या ५७ पुग्यो,२१ वेपत्ता (अपडेट) - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | १२ श्रावण २०७३, बुधबार १५:२७ |
काठमाडौं । अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरोमा परि बुधबार साँझ सम्ममा देशभर कम्तिमा ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने २१ भन्दा बढी वेपत्ता बनेका छन् ।
बाँकेको राप्ती नदीमा फसेका छ सय भन्दा बढीको उद्दार गरिएको छ भने बागलुङका विभिन्न स्थानबाट विस्थापितहरुलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको छ । उता सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण सप्तरीको गोबरगाढाका ३ सय घर परिवारको अवस्था नाजुक बनाएको छ । सरकारले पनि बाढी पहिरो परेकाहरुको उद्दार र राहतका लागि ७५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।
दुइ दिन देखि परेको अविरल वर्षाका कारण आएको पहिरोमा परि वुधवार साँझसम्म प्यूठानमा ३५ को मृत्यू भएको छ भने ६ जना वेपत्ता रहेका छन् । फोप्ली गाविसमा मात्र २४ जनाको शव संकलन गरिएको छ भने २ जना अझै वेपत्ता छन् । फोप्ली ३ मा १० जना, फोप्ली ४ मा चार जनाको सव संकलन गरिएको छ भने झिमरुक नदिले वगाएर ल्याएका मध्य तीन जना फोप्ली ३ का भनि सनाखत गरिएको छ । वुधवार विहान करिव ३ बजे फोप्ली गाविस वडा नं. ६ माक्रेमा ४ घर पहिरोले वगाउँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य हरिबहादुर केसीसहित ७ जनाको मृत्यू भएको छ भने एक जना घाइते भएका छन् । झिमरुक नदिको कटानले प्यूठानका प्रमुख वजारक्षेत्रहरु जोखिममा रहेका छन् ।
यता पहिरोमा पुरिएर रोल्पा र बागलुङमा आठ जनाको मृत्यु भएको छ । रोल्पाको उत्तर पूर्वमा पर्ने उवा–९ घुस्रीमा पहिरोले घर पुरिदाँ वेपत्ता भएकाको शव बुधबार फेला परेको हो । यता बागलुङको पश्चिम राजकुट र दर्लिङमा पनि पहिरोमा परि चार जनाको ज्यान गएको छ भने दुई जना बेपत्ता भएका छन् । बागलुङको बिभिन्न स्थानबाट विस्थापित बनेकाहरुलाई बुधबार अपरान्ह नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको छ ।
यता पर्वत माझफाँट–३ मा कपास उद्योग माथिको ढिस्को खस्दा पुरिएर उद्योगमै बस्ने नुवाकोट जिल्ला देउराली गाविस–२ की ११ बर्षीया अंकिता तामाङको मृत्यु भएको छ । उता दाङको देउखुरीमा राप्ती नदीले बगाएर ल्याएका पाँच वटा शव फेला परेको छ । राप्ती नदीको बाढीले बगाएर ल्याएका तीन महिला र दुई पुरुषको शव बुधबार बिहान फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ । फेला परेका पाँच शव मध्ये एक जना दाङ गंगापरस्पुर ९ का ठगुराम चौधरीको रहेको प्रहरीले । अन्य चार जनाको सनाखत हुन सकेको छैन ।
यसैबीच गंगापस्पुर गाविस वडा नं. ९ निवासी ४० वर्षीय ठाकुरराम चौधरीको स्थानीय खोलामा आएको बाढीले बगाएर मृत्यु भएको छ भने कैलालीको हरि रानाकी १२ वर्षीया छोरी चाँदनी रानाको बुधबार कान्द्रा नदीमा नुहाउने क्रममा बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । यता नवलपरासीको गण्डक क्षेत्रका बाँध फुट्ने खतरा बढेपछि तत्कालै गण्डक क्षेत्रमा तीन गाउँ बिकास समिति उच्च जोखिममा परेका छन् । नवलपरासीको नर्सहीमा रहेको नम्बर १३ ठोकर र पक्लिहवाको ३ नम्बर ठोकरका स्परहरु (बल्क) नारायणी नदीले बगाएपछि जोखिम बढेको हो । उता राप्ती नदीको बाढीले बाँकेको होलियामा फसेका ६ सय भन्दा बढीको नेपाली सेनाले हेलिकप्टर र डुंगा मार्फत उद्दार गरेको छ ।
Previousआगामी चैतमा स्थानीय चुनाव गर्न काँग्रेस माओवादी सहमत
Nextभूकम्प पीडितले बैंकहरुबाट २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउँने